Arrinta No aad socda Mac ama nidaamka Windows, MOV noqon kartaa nooca la yaqaan video aad u. Waxaa markii hore ee ay soo Apple for loo maqli on QuickTime, laakiin hadda waa la abuuri karo by iMovie, dhoofiyay QuickTime, iyo siyaabo kale oo badan. Lugood waa qalab wax lagu maareeyo warbaahinta in ay na siiyaan sahlo buuxa si ay ugu raaxaystaan ​​muusikada, videos, bandhigyada TV, iwm,. Waxaa guud ahaan waxay taageertaa MOV, MP4 video format la xayiraad qaar ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in aad mararka qaarkood ay ku guuldareysato inay ku dari aad files QuickTime MOV in Lugood ay sabab u tahay arrinta incompatibility, sida encoder, xallinta heerka, xoogaa, iwm aan la aqoonsan Lugood aad. Waa inaad iyaga loogu badalo in ay Lugood qaab ay taageerayaan si ay u ciyaaro si habsami leh ku Lugood.
Si tan loo sameeyo, adag oo dareen leh video Converter waa gargaar aad u weyn. Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa qaar ka mid ah video converters weyn in aynu aad si fudud loogu badalo MOV in Lugood. Just akhri maqaalka si aad u hesho MOV weyn in Lugood video Converter.
Qeybta 1: Hel Best & Professional MOV in ay Lugood Converter
Qeybta 2: MOV Free in Lugood Converter
Qeybta 2: MOV Online in Lugood Converter
Wondershare Video Converter Ultimate Waa adag iyo dareen video Converter. Sidaa daraadeed, aad u bedeli karaan faylasha QuickTime MOV in Lugood xawaare ultrafast iyo eber oo tayo leh khasaaro. Waxaa intaa dheer, uma baahnid inaad wax tababar ah oo farsamo si ay u bilaabaan diinta files MOV si aad u Lugood, waa si dhab ah sida ugu fudud ee 1-2-3.
Professional video Converter: Waxaad u isticmaali kartaa si convet files ee MOV, MP4, AVI, MKV, FLV, iwm Sidoo kale waxaad si toos ah u dhigi kara iPhone, iPad, qalabka ama Android Console ciyaarta sida qaabab wax soo saarka leh presets filaayo.
Best MOV Converter: Waxaa badasha videos at 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan iyo u qulaity khasaaro, ilaalinteedu 100% asalka video oo tayo leh.
Xoog video editor: Waxaad u isticmaali kartaa sida iMovie ah ama Final Cut Pro kale oo ay wax ka bedel files MOV ka hor diinta.
DVD gubi Great: Haddii aad rabto in aad DVD ah oo khibrad leh, app tani waxay noqon kartaa doorashada ugu fiican ee aad. Waxaa ka gubtay video inay DVD la qurux badan arrimo menu loogu talagalay.
Qeybta 1: files Import MOV in MOV si Converter Lugood u Mac
1. Ku dar files QuickTime MOV in MOV in ay Converter Lugood
Si aad u dajiyaan files QuickTime MOV galay files MOV in app Lugood Mac ah, aad si toos ah u soo jiidi kartaa oo iyaga hoos u Converter ah, ama madaxa soo Gudbiyay menu ka dibna dooro "Load Media Faylal ay" si ku shuban files MOV aad.
Fiiro gaar ah: Dufcaddii diinta waxaa lagu taageeray, aad dajiyaan karaa in ka badan hal file hal mar, si loo yareeyo aad diinta iyo waqtiga badbaadiyo.
2. Set Lugood M4V sida qaab wax soo saarka
Tani Video Converter u Mac siisaa nooc qaab badan oo presets u Apple Devices. Waxaad dooran kartaa hoos ku siyaabood:
Riix image Qaabka video kasta oo horyaalka ka sokow in la furo suuqa kala qaab wax soo saarka. In ka "Video" category, waxaad ka heli doontaa qaab Lugood M4V, kaliya waxa ay doortaan sida qaab wax soo saarka.
Dooro presets u model gaar ah oo aad iPod, iPad, ama iPhone ka "Qalabka" category, faylasha la gediyay si toos ah kuugu dari doonaa Lugood haddii aad u dhigay doorashada "Add Faylal ay si Lugood Library qaab beddelidda kadib". (Si aad u awood, kaliya halkan soo galana menu, guji "Xulasho"> "Beddelaan" si ay u helaan suuqa kala doorashada, ka dibna riix badhanka Beddelaan in bar menu iyo hubi ikhtiyaarka).
3. Edit MOV videos
Barnaamijka waxaa kale oo hawlaha tafatirka kaas oo awood kuu inuu wax ka beddelo saarka video. Qalabka tafatirka Common waxaa la siiyaa: dalagga, jar, saamayn, watermark, subtitles (guji badhanka image Edit dhankiisa midigta oo ah video kasta item).
4. Start si loogu badalo QuickTime MOV in Lugood
Marka goob walba sida aad jeceshahay, oo kulli wixii uu kaga tegey inay hadda samayso waa guji badhanka Beddelaan. Tani MOV in Converter Lugood waa mid aad u hufan ee diinta iyo bar horumarka idin tusin doonaa boqolkiiba iyo waqtiga soo hadhay.
# 1. MOV Free in Lugood Converter: Wondershare Video Converter Free
Tani waa MOV ugu fiican oo lacag la'aan ah si ay u Lugood video Converter ee aan abid la kulmay. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad MOV diinta si xor ah u Lugood aan watermark. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad xaalkaa videos download iyo online videos.
Pro: MOV si xor ah Lugood video Converter aan watermark, aad u fudud user interface
1. Waxaa jira presets ma heli karo. Waxaa loola jeedaa mararka qaarkood waxaad u baahan doontaa in ku dhow xuduudaha ka qaabab wax soo saarka aad gacanta.
2. Xowliga diinta video ma aha sida ugu dhakhsaha badan Video Converter Ultimate.
3. Lama ogola in aad u isticmaasho si ay u gubaan video inay DVD.
Qeybta 3: MOV Online in Lugood Converter
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MOV (QuickTime) si Lugood